Ọhụrụ Martech Zone Akara maka 2019 | Martech Zone
Otu ebe m na-etinyeghị ego na ntinye aha ya bụ saịtị a. Mgbe m gị n'ụlọnga nwere nnukwu akara m hụrụ n'anya, ma anyị na ndị ahịa anyị niile na - arụ ọrụ maka ịkpọ aha ha, enweghị m bandwidth iji rụọ ọrụ na Martech Zone ika… ruo taa.
Ihe ochie "M" bụ isi ihe atụ gbanwere ntakịrị nke m zụtara na ngwa ngwa mgbe m gbanwere ngalaba ahụ. Ọ bụ ihe doro anya, ọ naghị anọchite anya ihe ọ bụla, na-enye m nsogbu mgbe ọ bụla m hụrụ ya.
The mmebe na-arụ ọrụ na Highbridge logo hụrụ na ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche na nke okike iji nwekwuo nsonaazụ maka ndị ahịa anyị. Ihe nnọchianya ahụ bụ mgbasa ozi na aka ekpe na k n'aka nri, mana nwere ụzọ pụrụ iche na-akwado akụ elu.
M na mgbe a na-akwado nke -acha anụnụ anụnụ m logo dị ka mma, ọ dị jụụ, calming, na-emesi obi ike. Yabụ, kama ịmalite ncha site na iji akara ngosi ọhụụ Martech Zone, Akwụsịrị m ma tinyekọtaghachi ndị ahụ Highbridge logo. Oyiyi di nkpa ka m choro icho ulo oru na blog.
O nwere ike ọ bụghị ihe doro anya, mana akara ngosi na-agwakọta m, t, na z… iji gosipụta martechi zotu. Enwere m obi ụtọ ide ọtụtụ ihe atụ tupu m maba n'ime onye na-ese ihe ma wuo ya. Ọ ka bụ ihe a na-adịghị ahụkebe, ya mere ekwenyere m na ọ bụ onye nnọchianya nke blog a.
Yana logo, M meela mee na gbanwetụrụ isiokwu on chukwuebuka nakwa. Ọ bụrụ na ị na-agụ maka nke a na akwụkwọ akụkọ anyị, gbaa mbọ pịa pịa ma lee anya. M belatara ọnụọgụ ederede, ederede a gbanwere na mkpụrụedemede ederede maka ịgụzigharị nke ọma, ọbụnakwa akara agba nwere edemede (enwere m ike ịme ha)
Otu ebumnuche m n’afọ a bụ ige gị ntị karịa ma bido ịkparịta ụka gị na gị… na-agbanwe ndị na-ege m ntị n’obodo. Yabụ, a nabatara nzaghachi ma gbaa ume! Mee ka m mara ihe ichoro imuta banyere otu m ga esi melite saiti na pọdkastị.
Tags: mbọnDK New Medialogo